Zọpụta ohere na gị gam akporo ama | Akụkọ akụrụngwa
Anọ Atụmatụ na-azọpụta ohere na gị gam akporo ama
N'oge na-adịbeghị anya ịnwe ngwaọrụ mkpanaka nke nwere 8 GB nke nchekwa dị n'ime ya bụ nnukwu ikwubiga okwu ókè na ihe ọtụtụ na-etu ọnụ. Taa inwe ihe na-erughị 32 GB nke nchekwa na-abụkarị otu nsogbu inwe ike ịchekwa foto anyị niile, egwu ma wụnye ngwa, nke na-abawanye ebe dị ukwuu karị.
Ihe onyonyo anyị na-eji igwefoto nke ekwentị anyị oge ọ bụla nwere mkpebi dị elu ma wee were ohere karịa, ngwa ndị ahụ abawanyela na njedebe a na-atụghị anya ya na ụfọdụ na-etinye ọtụtụ narị megabytes nke ohere nke ọnụ anyị. Tụkwasị na nke ahụ, ngwaọrụ mkpanaka abụghịzi maka ịkpọ oku ọ na-arụ ọrụ dị ka onye na-agụ akwụkwọ ọkpụkpọ egwu na mgbe ụfọdụ ọbụlagodi dị ka ọkpụkpọ vidiyo. Akwụkwọ, abụ na vidiyo n’ezie na-ewere ohere dị ukwuu.
por Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ọtụtụ ndị nwere nsogbu na nchekwa dị n'ime ekwentị gị, anyị ga-enye ndụmọdụ 4 na-atọ ụtọ ka ị nwee ike idozi ha, ma kpam kpam, ma ọ bụrụ na akụkụ ụfọdụ ka ọ ghara ịgbanwe ọnụ n'ihi na ị nweghị nchekwa dị n'ime.
Tupu ịmalite anyị ga-agwa gị na ịkwesighi itinye ndụmọdụ 4 ahụ n'ọrụ, mana ị nwere ike ịhọrọ iji nke mbụ na nke ikpeazụ ma ọ bụ naanị nke atọ.
1 Hapụ ohere na ekwentị gị
2 Jiri kaadi microSD
3 Mee nhicha na ama gị
4 Chọọ maka ngwa ndị na-ewe obere ohere
Hapụ ohere na ekwentị gị
Na ngwa ngwa ngwa mkpanaka gị, ị ga - ahụ ngwa ndị ga - enyere gị ohere ịhapụ ohere na ngwa ngwa ma ọ bụ obere karịa., Examplesfọdụ ihe atụ nwere ike Nna ukwu dị ọcha o Avira Optimizer. Ngwa ndị a ha ga-enyocha ngwaọrụ anyị ma kwe ka anyị hichaa ebe nchekwa ahụ, faịlụ nnọrọ na na ha anaghịzi eji ya na ọ ga-achọpụta ngwa ndị agbanyeghị na anyị etinyego anyị anaghị eji oge niile ma ọ bụ na anyị anaghị eji ya.
Ngwa ndị ọzọ dị ka Gallery Doctor na-enye anyị ohere inyocha onyogho niile anyị nwere na ama anyị iji chọpụta ndị, dịka ọmụmaatụ, emegharịrị ma ọ nweghị ezi uche ịchekwa oge abụọ ma ọ bụ karịa.
Ezigbo Ram-Free Ram, Space dị ọcha & Antivirus
Cleaner site na Gallery Dọkịta
Jiri kaadi microSD
Imirikiti ekwentị na ahịa na-enye ohere nke gbasaa nchekwa dị n'ime nke otu iji kaadi microSD, nke nwere ọtụtụ nha, mana na anyị ga-ahụ ha nke 32 ma ọ bụ 64 GB. Na kaadị nke ụdị a anyị nwere ike ịchekwa onyonyo anyị were were ya mere ịchekwa ohere ga-adị ukwuu.
Na mgbakwunye, site na ngwa ụfọdụ na ụfọdụ ngwaọrụ nwa afọ, anyị nwere ike ịgbanwe ụfọdụ ngwa na kaadị a ka ha ghara itinye nnukwu ohere nchekwa na ọdụ.
O di nwute n'oge na-adịbeghị anya ụfọdụ ndị na-emepụta ihe na-ewepụ ohere nke ịgbasa nchekwa dị n'ime site na kaadị microSD, na ebumnuche nke ịre ọdụ nke nnukwu nchekwa na nke dị oke ọnụ. Luckily ọ bụkwa eziokwu na ọ na-esiwanye ike ịhụ ngwaọrụ mkpanaka nwere nchekwa na-erughị 16 GB.
A na-ere kaadị ndị a taa na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ahịa ma ọ bụ nnukwu mpaghara ọ bụla, mana ọ bụrụ na anyị ahapụ gị nhọrọ microSD 32 GB nke ị nwere ike ịzụta site na Amazon HERE.
Mee nhicha na ama gị
Site n’oge ruo n’oge mkpebi dị oke mma nwere ike ịbụ ịsacha na nke ahụ bụ ọ na-adịwanye na-agawanye, dịka ọmụmaatụ, ịwụnye ngwa na-enweghị ọtụtụ uche, nke anyị na-anaghị eji emechaa, nakwa na ha na-anọ na ọdụ ahụ n'ụzọ na-abaghị uru.
Nọdụ ala nwayọ ma gbalịa iwepu ngwa ma ọ bụ egwuregwu ị na-ejighi, ihe onyonyo na-apụta n'amaghị ama, nke ala na-apụta, nke na-enweghị isi ma ọ bụ ndị ị kwughachiri. Na mgbakwunye, ọ dịkwa karịa ike ị nwere faịlụ na ụdị dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, ibudatara na email na nke anaghịzi ejere gị ozi.
Ee, tkpachara anya na ịmalite njem nke ihichapu ihe ị maghị nke ọma, n’ihi na a na-agba ọtụtụ ndị ọrụ ume ihichapụ ma kwụsị ihichapụ ihe ma ọ bụ faịlụ ndị dị mkpa maka ịrụ ọrụ kwesịrị ekwesị nke ngwaọrụ mkpanaka ahụ. Hichapụ naanị ihe ị ji n'aka na ị chọghị na nke ahụ enweghị ọrụ dị mkpa.
Chọọ maka ngwa ndị na-ewe obere ohere
Ọ bụrụ na ekwentị mkpanaaka gị enweghị nchekwa dị n'ime ya ma ị bi na nsọtụ, ezi echiche ịchekwa ohere nwere ike ịbụ ịchọ ngwa ndị na-arụ otu ọrụ ahụ, mana nke ahụ na-ewe obere ohere.
Dịka ọmụmaatụ ihe nchọgharị weebụ Chrome bụ otu n'ime ihe nchọgharị kachasị mma na ahịa, kamakwa otu n'ime ohere na-ewe ohere. Nhọrọ dị mma nwere ike ịbụ iji ihe nchọgharị weebụ anyị ga-ahụ na amaala amaala ma ọ bụ chọọ ụdị ọzọ ndị ọzọ dịka Opera Mini na nke ahụ ga-ewe obere ohere. Ihe nchọgharị niile na-enye anyị ohere ịchọgharị na netwọk nke netwọk, ọ bụ ezie na ụfọdụ na-enye anyị nhọrọ ndị ọzọ, mana na ọnụ ahịa nke itinye ohere nchekwa na anyị enweghị.
Na nke a, nhọrọ ọzọ dị mma bụ iji ụdị weebụ nke ọtụtụ ngwa nwere iji chekwaa ebe nchekwa. Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike ịbụ nnukwu echiche iji Twitter ma ọ bụ Facebook na ụdị weebụ ha, yabụ anyị ga-echekwa ọtụtụ ohere site na ịghara itinye ngwa ndị a.
Ndị a bụ ndụmọdụ anọ iji chekwaa ebe nchekwa na ekwentị mkpanaaka gị, ọ bụ ezie na anyị maara na e nwere ọtụtụ ndị ọzọ. N'ihi nke a na dịka anyị na-emekarị, anyị ga na-edu mgbe niile site n'ịmara ihe aghụghọ gị bụ iji chekwaa ohere. Nwere ike izipu ha ya n’aka anyị site na oghere edebere maka ikwu okwu na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta anyị nọ n’ime ya.
Njikere ịmalite ịchekwa ohere nchekwa na ekwentị gị?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Anọ Atụmatụ na-azọpụta ohere na gị gam akporo ama
Ndị a bụ smartwatches kachasị mma na Wear gam akporo